I-Srčeko B&B - Igumbi M1 - I-Airbnb
I-Srčeko B&B - Igumbi M1
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguSuzana
Ngeefestile ezinkulu, igumbi ngalinye likhanya kakhulu. Igumbi ngalinye likwabonisa iTV, iWiFi yasimahla kunye neewodrophu ezinkulu ezinehanger kunye neeshelufa. Iindwendwe zinokwenza ukutya kwikhitshi ekwabelwanayo ngalo, kwaye zingatyela kwi-terrace yepropathi, kumagumbi azo okanye kwiflethi yehostele ukuba ziyathanda.
Ngokuxhomekeke kwixesha lonyaka, iindwendwe zethu zinokuphatha amaqunube amatsha, amaqunube, amaqunube kunye neeapilkosi ngqo kwigadi yethu!
Kwakhona, abamelwane bethu bokuqala abakho ngaphantsi kwamahashe amathathu amahle athanda ukusityelela yonke imihla. Ngokuxhomekeke kwisimo sengqondo sabamelwane bethu abathandekayo, iindwendwe zinokubondla kwaye zibafuyile :)
Ubumelwane bunomtsalane welali encinci - abantu basekhaya bayangeneka kwaye njengoluntu, wonke umntu uchulumancile kakhulu ngebali leSrčeko. Kubandakanya iicafe ezimbini ezincinci, iindawo zentengiso ezimbini kunye necawa - yonke into efunwa yilali enye :)
Abaninikhaya bahlala kumgangatho ophantsi wendlu yiyo loo nto behlala befumaneka. Kwangaxeshanye, baya kukuhlonela ukuba ngasese kwakho.